Uthi kumele libumbane iqembu | News24
Uthi kumele libumbane iqembu
isithombe: thami ka-nkosiAmalunga eNkatha freedom party emi NoHassan Motala oyilunga lesigungu esiphezulu eqenjini.
IQEMBU lenkatha Freedom Party esifundeni soGu selinxenxe ukuba wonke amalunga abumbane futhi akwazi ukubambisana njengalokhu kubhekwe okhethweni lohulumeni bakazwelonke ngonyaka ozayo.
Lawa ngamazei kasihlalo waleliqembu uSifundo ngwane ngesikhathi eqeda ukuqokwa njengosihlao weqembi emasontweni ambalwa edlule.
UNgwane uthi njengalokhu iqembu lakhe lie labamba ukhetho lokukhetha ubuholi emasontweni ambalwa edlule kubonakale ukukhula okukhulu emalangeni aleliqembu njengalokhu amanye ayekade ephakanyiswa ayevele angazimukeli izihlalo ngoba enzela ukuba kungabibikho ukuhudulisana Kanye noqhekeko eqenjini.
Ungwane ukusho lokhu nje iqembu lilungiselela ukhetho lokuchibiyela oluzoba seGamalakhe kuyona lenyanga.
Ungwane uthi ubuholi baleliqembu Kanye namalunga alo azimisele ukuthi abone iqembu lenza kahle uma kuyiwa okhethweni.
“Akukho okubaluleke njengokubumbana nokusebenzisana nazozonke izinhlaka ezithintekayo ekukhuliseni iqembu, Angeke nangengozi sivume ukuthi ingozi eyake yasigqema kuba khona uqehekeko eqenjini kuze kuzaleka amanye amaqembu iphinde isishaye futhi,”kusho uNgwane.
Elinye ilunga leqembu leNkatha elingavumelekile ukukhuluma nabezindaba liveze ukuthi okuhle kakhulu ngukuthi kunamalunga amaningi eqembu ayekade ehambile ngesikhathi kuqala uqhekeko aya eqenjini leNational Freedom Party.
Lelilungu lithi kukhombise okukhulu ukuvuthwa emalungwini eqembu ukubabuyisa Kanye nokubemukela kanti lokho kuzosiza iqembu ekutheni likhwazi ukuba likhule futhi libuyise nesithunzi salo.